Thelazia amin'ny alika | Alika Manerantany
Toy ny olona, ​​ny alika dia mety hijaly koa. Ny ratsy izay maka fanahy amin'ny fiasa marina ny vatany izay tsy misy fiheverana mety dia mandany ny ain'ny alika ary afaka mamela azy eo ambanin'ny a toe-javatra izay tsy mampandeha ny môtô, ny ati-doha, na ny fahaizanao miaro tena. Soa ihany, ny ankamaroan'ny aretina amin'ny alika voarakitra dia efa nanasitrana tamim-pahombiazana na nesorina tamin'ny fomba fanaovana vaksiny sy ny fifehezana ny fahasalamana aza, saingy tsy midika izany fa izay rehetra tokony hodian-tsy hita dia arakaraka ny zava-drehetra.
Na dia ankehitriny aza dia misy tranga aretina sasany amin'ny alika manohy mitaky ireo niharam-boina izy ireo na dia ao anatin'ity tetik'asa fanaraha-maso ara-pahasalamana ity aza; Ny iray amin'ireto aretina ireto dia i Thelazia ary hivelatra kely kokoa eto ambany izahay.
1 Inona ny thelazia amin'ny alika?
2 Soritr'aretin'ny thelazia amin'ny alika
Inona ny thelazia amin'ny alika?
Ny Thelazia dia Aretina niaviany aziatika izay niely nanerana ny kaontinanta eropeana ary izany dia mampiavaka ny olona amin'ny biby sy ny tsy fahazoana aina (eny, io aretina io dia azo ampitaina amin'ny olona ka hatramin'ny biby).
Ity aretina ity dia vokatry ny fisian'ny katsentsitra antsoina hoe Thelazia callipaeda izay hita amin'ny karazana fanidinan'ny hazo fihinam-boa izay miseho mandritra ny vanim-potoana misy kalitao. Ireo lalitra ireo dia manintona ny tsiambaratelon'ny mason'ireo biby ary rehefa tonga eo amboniny izy ireo dia mahavita mandao ilay katsentsitra izay manomboka miteraka tsy fahazoana aina sy fivontosana. Zavatra tsy manam-paharoa dia ny hitrangan'izany rehetra izany, indraindray dia amam-bolana maro ary tsy misy mpandray na biby mahatsapa azy amin'ny fomba miavaka.
Ny tsingerin'ny fiainana an'ity katsentsitra ity dia misy mpampiantrano raikitra iray, izay azon'ny katsentsitra fahanana ary afaka mandeha matetika ny lalitra ka afaka mihetsika ao anaty lalitra izay ao ny lalitra avelany izay mihalehibe ny aretina mandra-pikitika ny tsiambaratelon'ny mpitsidika hafa. Ity dingana iray manontolo ity dia afaka maharitra iray volana vao mihamatotra ny olitra ary vonona ny hatch larva maro ao amin'ny mpampiantrano azy. Ny tranga amin'ny alika dia rehefa akaiky sy maharitra ny infestation dia azo jerena ao anaty maso ilay katsentsitra. Hita kokoa io ho an'ny alika mipetraka akaikin'ny hazo fihinam-boankazo, ka rehefa misy fiantraikany eo amin'ny tontolo iainana (toy ny fotoan'ny taona) dia hiharihary eo amin'ny mason'ny biby ilay katsentsitra.
Soritr'aretin'ny thelazia amin'ny alika
Anisan'ireo soritr'aretina izay azo tsapain-tanana amin'ny alika amin'ny fotoana hita ny aretina amin'ny dingana mandroso Izy ireo dia mandrovitra, conjunctivitis, serous ary na dia purulent miafina (raha ny tontolo iainana mahatonga azy ireo mety kokoa noho ny bakteria faharoa aretina), mangidihidy, mahazo aina manodidina ny maso. Ny tranga faran'izay mafy azo tsikaritra dia ny fery amin'ny maso iray na roa ary io dia afaka 30 andro hatramin'ny nidiran'ny katsentsitra tao anaty maso (nomena ny vanim-potoana nisehoan'ny soritr'aretina, dia ny 7 ka hatramin'ny 15 andro).
Para sorohy ireo karazana aretina ireo na koa hitsaboana azy ireo Ny tsara indrindra dia ny mitady fomba hanafoanana ny katsentsitra mivantana, zavatra izay tsy vitan'ny mpitsabo biby fotsiny izany ary tsy azo atao foana na hita na tsia ireo kankana.
Ny fampiasana zava-mahadomelina manokana dia ahafahana miady amin'ny fihanaky ny katsentsitra nefa kosa omen'ny matihanina ara-pahasalamana. Na dia sorohy ny fiparitahan'ireo katsentsitra ireo Ao amin'ny biby fiompintsika dia sarotra izany, tsara kokoa ny misoroka lavitra araka izay azo atao ny fihanaky ny lalitra voankazo izay afaka manomboka ny tsingerin'ity katsentsitra ity ary mitazona ny alika amin'ny toerana mihidy raha mbola azo atao ny mahafantatra ny fepetra sasany izay mandray anjara amin'ny areti-mifindra na ny ny fiparitahan'ity katsentsitra ity amin'ny karazana alika hafa ary na dia ny olombelona aza ary ireo tranga mifanohitra amin'izay ialan'ny olombelona ny areti-mifindra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » aretina » Thelazia amin'ny alika
Ahoana ny fomba hanampiana ny alika hatory tsara kokoa